Awunakho ukuthenga i-OnePlus 3 e-United States okanye eYurophu | Iindaba zeGajethi
Awunakuphinda uthenge i-OnePlus 3 eMelika naseYurophu
I-OnePlus yinkampani ethi ngexesha elifutshane ukwazile ukungaziwa kuthi ukuba aphawule ngomdlalo wakhe ngamnye. Phakathi kwale midlalo bekusoloko kuyindlela yokufumana iitheminali zabo, ezazingowokuqala kwisimemo. Ngoku umdlalo awusekho, kwaye i-OnePlus 3 ithengiwe ngaphandle kwemfuneko yesimemo.
Kodwa okokugqibela, siyajongwa xa ungasakwazi ukuthenga le fowuni sele ikhankanyiwe njengoko ingasafumaneki kwiwebhusayithi yale nkampani. Kwaye kungenxa yokuba izolo i-OnePlus 3T isungulwe, kwaye wenze indlela yokuthenga kwakho okulindelweyo ngoNovemba 22, U-OnePlus wenze isigqibo Ukuyekiswa kwayo, ke ekuphela kwendlela yokufumana iflegi yayo iya kuba nge-Q3.
Simangalisiwe kancinci ukuba a ifowuni enkulu njenge-OnePlus 3Emva kokuchitha iintsuku ngaphandle kokwazi isizathu sokungabikho kwesitokhwe kwiwebhusayithi yayo, amanye amazwi athi izakufumaneka kungekudala, kuya kufuneka sazi ukuba ekuphela kwendlela yokufumana eyona nto iphambili kule nkampani iya kuba yi-OnePlus 3T.
I-OnePlus 3T yifowuni ebandakanya ezinye izinto ezihlaziyiweyo ezinje ngeprosesa ekhawulezayo, a ikhamera yangaphambili efikelela kwi-16 MP kunye nebhetri enkulu kune-OnePlus 3. Le fowuni iya kufumaneka ngokusemthethweni ngo-Novemba 22. Ixabiso layo liya kuba ngama-euro angama-439 kwimodeli engama-64 GB kunye ne- $ 479 yenguqulo ye-128 GB. Nakwixa elizayo, inguqulelo yegolide iya kufumaneka.
I-OnePlus iya kuthatha Esi sigqibo senziwe ngokwaso kunye nokukhuthaza ukuthengiswa kwe-OnePlus 3T entsha ethatha indawo yokuba yindawo ephambili yenkampani yokubeka ecaleni loo OnePlus 3.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Awunakuphinda uthenge i-OnePlus 3 eMelika naseYurophu
Ezi ziimiboniso bhanyabhanya zokuqala zeHBO Spain kunye noluhlu
I-HBO sele iza kufika eSpain